यी हुन् लाल परी! कपाल, कपडादेखि सबै रातो, यस्तो छ कारण « गोर्खाली खबर डटकम
यी हुन् लाल परी! कपाल, कपडादेखि सबै रातो, यस्तो छ कारण
प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै शौक हुन्छ जुन ऊ पूरा गर्न चाहन्छ । तर त्यहाँ केहि शौकहरू छन् जुन धेरै विशिष्ट र प्रख्यात हुन्छन् । आज हामी तपाईंलाई उही कुरा भन्न गइरहेका छौं जसमा एउटी महिलालाई लाल परी भनेर चिनिन्छ किनभने उनी रातो रंगलाई माया गर्छिन् ।
उनी रातो रंगलाई धेरै माया गर्छिन् कि उनको कपाल पनि रातो छ र उनी पनि सधैं लुगा रातो लगाउँछिन् । तपाईं यो कुरा जानेर अझ चकित हुनुहुनेछ कि जोरिकाको घरको प्रत्येक चीज रातो रंगको छ ।
६७ वर्षीया जोरिका एक सेवानिवृत्त शिक्षक हुन्। उनले भनिन् कि उनी १८ वर्षकी भएदेखि उनले केवल रातो वस्त्र लगाइरहेकी छिन् । यो उनको सौख हो। वास्तवमा, जोरीका उनको वरिपरि सबै चीजहरू मात्र रातो देख्न मन पराउँछन्, त्यसैले उनी त्यसो गर्छिन् ।
सबै भन्दा आश्चर्यजनक कुरा यो हो कि जब जोरीका कसैको अन्त्येष्टिमा जान्छिन् पनि, रातो लुगा लगाएर उनी जान्छिन् । हाल, उनको घरमा पानीको हीटर मात्र त्यस्तो चीज हो जसको रंग रातो छैन, किनभने उनले आफ्नो पति जोरनको आदेशमा यस्तो हीटर किन्छिन् ।
यो रातो रंगको लागि चरम प्रेमको कारणले गर्दा बोस्नियाका मानिसहरूले जोर्डिकालाई लाल परि भनेर बोलाउँदछन्। उहाँ आफ्नो शहर मा यति प्रसिद्ध छ कि मानिसहरूले उसलाई सेलिब्रेटी भन्दा कम मान्दछन् ।
जोरीका भन्छिन् कि उनले आफ्नो विवाहमा रातो लुगा पनि लगाइन् । मानिसहरूलाई उनको रातो रंगको प्रेम यति धेरै थाहा छ कि उनको जन्मदिनमा पनि उसले रातो रंगको उपहार दिन्छ ।